WhatsApp မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ရယူနည်း - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 10/05/2022 20:03 | applications များ
WhatsApp သည် ထိုအရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် လူသုံးအများဆုံး စာတိုပေးပို့ခြင်း အက်ပ်များ, သည် ကျွန်ုပ်တို့များစွာ၏ဘဝတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ WhatsApp သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ဦးချင်း မက်ဆေ့ချ်များပေးပို့ခြင်း၊ အဖွဲ့များဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းခြင်း၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ နောက်ဆုံးပလက်ဖောင်းမွမ်းမံမှုများမှာ မက်ဆေ့ချ်များကို ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း သူတို့ဟာ အမြဲခြေရာတွေ ချန်ထားခဲ့ရပြီး တစ်ခါတစ်လေတောင် ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ သင့်မိုဘိုင်းမှ သင့်မက်ဆေ့ဂျ်မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ရယူနိုင်သည့် အချို့သောအက်ပ်များရှိပါသည်။
ဤစာတိုပေးပို့ခြင်းအပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အော်ဒီယိုများကို ပေးပို့ကြပြီး ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို အခြားသူများထံ မျှဝေပါသည်။ ယင်းအချက်ကို ယနေ့ခေတ်သို့ ဦးတည်စေသည်။ WhatsApp တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ထားသောချတ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမျှမဆုံးရှုံးစေလိုသောအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။. သင်ဤသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဤ post တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား WhatsApp မှတ်တမ်းကိုပြန်လည်ရယူနည်းကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။
1 WhatsApp ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
2 သင်ဖျက်လိုက်သော WhatsApp မက်ဆေ့ချ်များကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလား။
3 အရန်သိမ်းခြင်းဖြင့် WhatsApp မှတ်တမ်းကို မည်သို့ပြန်လည်ရယူရမည်နည်း။
3.1 Android အရန်သိမ်းဆည်းမှုမှ မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ရယူပါ။
3.2 IOS အရန်သိမ်းဆည်းမှုမှ မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ရယူပါ။
4 ပြင်ပအက်ပ်လီကေးရှင်းများဖြင့် မှတ်တမ်းကို မည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း။
4.1 iCareFone လွှဲပြောင်းခြင်း။
4.3 ဒေါက်တာ Fone
WhatsApp ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
ငါတို့ပြောတာ တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့လိုက် ချတ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ စာတိုပေးပို့ခြင်း အက်ပ် WhatsApp ဝဘ်မှတစ်ဆင့် QR ကုဒ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်နိုင်စေမည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း2ကျော်တွင် ဤပလပ်ဖောင်းကို လူပေါင်း 180 သန်းကျော် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ WhatsApp ၏ကျေးဇူး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးကို။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ အဲဒါတစ်ခုပါပဲ။ လုံးဝအခမဲ့ app ကို စာတိုပေးပို့ခြင်းအပြင် ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး ဘေးကင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များ၊ စာသား၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို မျှဝေခြင်းသည် ဘယ်သောအခါမှ မလွယ်ကူပါ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ၎င်း၏အသုံးပြုသူအများစုသည် ၎င်းတို့၏ chats များအကြောင်းအရာတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုပင် မျှဝေကြသောကြောင့် WhatsApp တွင်၊ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အဆုံးမှအဆုံး ကုဒ်ဝှက်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
သင်ဖျက်လိုက်သော WhatsApp မက်ဆေ့ချ်များကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလား။
မက်ဆေ့ခ်ျပို့ app ဖျက်လိုက်သော စာများကို ပြန်လည်ရယူရန် ခွင့်မပြုပါ။ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်လျှင် ၎င်းတို့သည် သင့်စက်မှ လည်းကောင်း၊ သင်ပေးပို့လိုက်သော စာမှ ပျောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖျက်လိုက်သောစာများသည် အပလီကေးရှင်းဆာဗာများတွင် ခြေရာခံမထားခဲ့ပါ။
အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် IOS နှင့် Android တွင် ကွဲပြားစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အဲဒီတော့ အာဏာရလာတဲ့အခါ ဖျက်လိုက်သော WhatsApp မက်ဆေ့ချ်များကို ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် မတူညီသော အခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သငျသညျ၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Android တွင် အကြောင်းကြားချက်များပါသော အကြောင်းအရာများမှတစ်ဆင့် မက်ဆေ့ချ်များကို ရယူရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။. ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် စကားဝိုင်းတွင် ရှိနေစဉ် မက်ဆေ့ချ်ကို ဖျက်လိုက်လျှင်၊ မက်ဆေ့ချ် အသိပေးချက် မထုတ်ပေးသောကြောင့် ၎င်း၏ အကြောင်းအရာကို သင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဖျက်လိုက်သော မက်ဆေ့ဂျ်၏ ပထမဆုံး စာလုံး 100 ကိုသာ ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် iPhone သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများ၏သမိုင်းကိုပြန်လည်ရယူရန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်းကို လစဉ် အရန်ကူးထားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် အော်ဒီယိုများကဲ့သို့သော မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများဖြင့် မက်ဆေ့ချ်များကို ပြန်လည်ရယူရန် အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ဟု သတိပြုသင့်သည်။
အရန်သိမ်းခြင်းဖြင့် WhatsApp မှတ်တမ်းကို မည်သို့ပြန်လည်ရယူရမည်နည်း။
WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျများ၏သမိုင်းကိုပြန်လည်ရယူရန်သင်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုရှိလိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ backup မှတဆင့်ဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းအတွက်တိကျသောပရိုဂရမ်များမှတဆင့်ဖြစ်သည်။
Android အရန်သိမ်းဆည်းမှုမှ မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ရယူပါ။
သင်ပြုသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ် Backup တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သေချာပါစေ။ cloud တွင်၊ သင့်တွင် Android စက်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါက၊ အရန်ကူးယူမှုကို Google Drive တွင်သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင့်အက်ပ်ကိုဖွင့်ပြီး သွားပါ။ ဆက်တင်များ၊ ချက်တင်များနှင့် အရန်ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။. ဤရွေးချယ်မှုကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်ထားသည်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။
နောက်တစ်ခုကတော့ လုပ်သင့်တယ်။ အက်ပ်ကို ဖယ်ရှားပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။. ထို့နောက် သင်သည် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို အတည်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး WhatsApp မက်ဆေ့ဂျ်မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန် အဆင့်အနည်းငယ်ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
အရန်သိမ်းခြင်းကို သိမ်းဆည်းထားသည့် သင့်စက်ပစ္စည်းသည် Google အကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ဦးစွာ သေချာအောင် ပြုလုပ်ရပါမည်။
IOS အရန်သိမ်းဆည်းမှုမှ မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ရယူပါ။
ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် IOS စက်များတွင် WhatsApp မှတ်တမ်းကို မည်သို့ပြန်လည်ရယူရမည်ကို အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ ကတစ် Android နဲ့တွေ့တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။သို့သော် ၎င်းသည် မီနူးနှင့် အသုံးပြုခွင့်ရွေးချယ်စရာများကဲ့သို့သော ရှုထောင့်အချို့တွင် ကွဲပြားသည်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင်ပါပဲ။ သင့်တွင် နေရာလွတ်ရှိရန် သေချာပါစေ။ သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းနှင့် iCloud နှစ်ခုလုံးတွင် လုံလောက်ပါသည်။ သင့်တွင် နေရာအလုံအလောက်ရှိသည်နှင့်၊ သင်သည် အလိုအလျောက် အရန်ကူးယူခြင်းသို့ ဆက်လက်သွားပါမည်။
သင်သည် iCloud သို့ လက်မှတ်ထိုးဝင်ပြီး iCloud အင်္ဂါရပ်ကို ဖွင့်ထားကြောင်း အတည်ပြုရပါမည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ သင် WhatsApp ကိုသွားပြီး ဖိုင်ကို ရွေးလိုက်ပါ။ configuration option ကို. နောက်ဆုံးတော့ မင်းလိုက်ရှာလိမ့်မယ်။ ကြောင် ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ backup လုပ်ထား အလိုအလျောက်။
cloud တွင် သိမ်းဆည်းထားသော အရန်ကူးခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးသောအခါ၊ သင်သည် စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်ကို ဖယ်ရှားပြီး ၎င်းကို ပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါမည်။. သင်အသုံးပြုနေသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပြီး သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ မှတ်တမ်းပြန်လည်ရယူရန်အတွက် စောင့်ပါ။
ပြင်ပအက်ပ်လီကေးရှင်းများဖြင့် မှတ်တမ်းကို မည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ WhatsApp တွင်ရှိသော စကားဝိုင်းများအားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားသည်။၎င်းတို့ကို အကြိမ်များစွာ ဖျက်လိုက်လျှင်ပင် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ရယူရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ မှန်ကန်သောကိရိယာများဖြင့် မလုပ်ဆောင်ပါက ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းကို ပြန်လည်ရယူရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သင့်လျော်သောအက်ပ်လီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်များကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းကို ပြန်လည်ရယူရန် ရည်ရွယ်ထားသော စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအက်ပ်များထဲမှတစ်ခု။ ဒီပလပ်ဖောင်းကတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မတူညီသောမီဒီယာများတွင် ဒေသန္တရအရန်ကူးယူဖန်တီးပါ။ Windows သို့မဟုတ် Mac ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဤအရန်ကူးယူမှုကို Android သို့မဟုတ် iPhone တွင်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းသို့ လွှဲပြောင်းနိုင် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
Android နှင့် IOS စက်ပစ္စည်းများအတွက် ရနိုင်သော WhatsApp ပြင်ပ အခြားအက်ပ်။ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်း မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးတွင် မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော ငွေပေးချေမှု ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအက်ပ်က သင့်ကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ရယူလိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကြည့်ရှုရန် ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်များကို ကြည့်ရှုပါ။ဖြစ်ဖြစ်၊ ၎င်းတွင် ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်ရရန် အခမဲ့သရုပ်ပြတစ်ခုပါရှိသည်။
ရည်စူးထားသော ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု သင့်စကားဝိုင်းများကို ပြန်လည်ရယူနိုင်သည့် ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်း။ အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် သင့်စက်များ၏ အခြားမည်သည့်စက်ပစ္စည်းများသို့မဆို ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တင်ပြသည်။
Dr. Fone သည် သင့်အား ရွေးချယ်ခွင့်နှစ်ခုကြားမှ ရွေးချယ်ခွင့် ပေးသည်၊ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ ဖျက်လိုက်သော ဖိုင်များအားလုံးကို စကင်န်ဖတ်ရန်နှင့် အခြားရွေးချယ်မှုမှာ သင့်မိုဘိုင်းရှိ ဖိုင်အားလုံးကို စကင်န်ဖတ်ရန် ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမျိုး အရေးကြီးသော စကားဝိုင်း သို့မဟုတ် ဖိုင်ကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏အရန်သိမ်းဆည်းမှုကို ပြန်လည်ရယူသည့်အခါ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသော်လည်း သင်သည် ၎င်းကို အပြည့်အဝနားမလည်ပါက၊ သင်သည် WhatsApp ကို အမြဲဆက်သွယ်ပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို အသိပေးနိုင်သည်။
အပလီကေးရှင်းအတွင်း၊ သင့်သံသယများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် မကြာခဏမေးလေ့ရှိသည့်မေးခွန်းများကို သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်၊ ပြဿနာများရှိနေသေးပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ လျှောက်လွှာ၏ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » applications များ » WhatsApp မှတ်တမ်းကို ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ။
Disney Plus အား စာရင်းသွင်းမှုမှ ဖြုတ်ပါ။